‏ चिल्लीकोट वाल खबर
बिष्णु देवकोटा/युवराज वली
दांग असोज ३ जिल्लाको अति बिकट पर्यटकिए तथा ऐतिहाँसिक पहाडि क्षेत्रका बालबालिकाहरुको एक भेलाले आज बालअधिकारको सुनिस्चितताका लागि बिजौरी ९ छिल्लिकोटमा प्रकाश वलीको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यिय सगरमाथा बाल क्लव गठन गरिएको छ । जस्को वरिस्ठ अपाध्यक्षमा क्षितिज पुन, उपाध्यक्षमा सानुकुमारी वली, सचिवमा पुर्णबहादुर वली, सह सचिवमा मनिसा वली, कोषाध्यक्षमा कमला के.सी रहनुभएको छ ।
दशैंमा एघार सहसचिव र पाँच डीआईजीको दोहोरो खुसी
काठमाडौं । हिन्दू मात्रै नभएर समस्त नेपालीजनको महानपर्व दशैंले कसका लागि खुसी नल्याएको होस् ? तर, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत एघार सहसचिव र नेपाल प्रहरीका पाँच डीआईजीको हकमा भने दशैं �दोहोरो खुसी�का साथ आउँदैछ । दुई दिनकै बीचमा कुनै त्यस्तो राजनैतिक चलखेल र उतारचढाव भएन भने वरिष्ठताका आधारमा नेपाल प्रहरीका पाँच डिआईजी दिनकर शमशेर राणा, पुष्कर रेग्मी, गंगा पाण्डे, विनोद सिंह र रमेश विक्रम शाहको एआईजीमा बढुवा हुनेछ भने लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका तेत्तीस सहसचिव मध्ये एघार जना सचिवमा बढुवा हुने छन् ।
�खल्लो भो ! �पुलीस डे��
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आफ्नो ५७ औं जन्म दिवस अर्थात् �पुलीस डे� मनाइरहेको छ । विधिवतरुपमा कार्यक्रम सोमबार सकिए पनि आन्तरिक कार्यक्रम भने अझै जारी छ । २८ गते आईतबार र २९ गते सोमबार विशेष रुपमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै �पुलीस डे� पुलीसहरुकै अर्थमा �भव्यता�का साथ मनाइयो ।
कान्तिपुरको विश्वास भत्किँदो, पत्रकार तेस्र्याएर बैंकलाई धम्की ?
काठमाडौं । मिडीयाको आडमा हरेक थोक गर्दै आएका कान्तिपुर पब्लिकेशनका मालिकद्वय कैलाश सिरोहीया र स्वस्तीका सिरोहीयाको कर्तुत एकपछि अर्काे गर्दै सार्वजनिक हुन थालेको छ । धन आर्जन गर्न उनीहरुले केसम्म गर्न पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने सिरोहीया दम्पत्तीकै लगानीमा खुलेको ‘कान्तिपुर रिटेल्स प्राइभेट लिमिटेड’ले पनि पुष्टि गरेको छ । बीस वर्षअघि सरकारी मुखपत्र ‘गोरखापत्र’को प्रतिस्पर्धी भएर जन्मे लगत्तै पाठकले मन पराएकै कारण नेपालको नम्वर वान मिडीया हाउस बन्न सफल ‘कान्तिपुर’को ब्यानरमा सिरोहीया दम्पत्तीले दाल, चामल, नुन, चिनीको समेत व्यापार थालेको रहश्य खुलासा भएको छ । दाल–चामलको व्यापारमा समेत ठूला व्यापारीलाई पत्रकार तेस्र्याएर सिरोहीयाले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको बताइएको छ । ‘कान्तिपुर रिटेल्स प्राइभेट लिमिटेड’को मुख्य व्यापारिक थलो समेत कान्तिपुर पब्लिकेशन परिसरमै राखिएको छ ।
काठमाडौंमा आजसम्मकै भिषण आगोलागी, विवादास्पद चौधरीको करोडौं स्वाहाः बद्मासी लुकाउन आगो लगाउ�दा विनाशै निम्तियो
चौधरी र उपाध्यायको योजनामा आगो दन्क्याइएको आशंका
काठमाडौं । राजस्व छल्न र उपभोक्ता तथा ग्राहकमाथि ठगी गर्न माहिर चौधरी गु्रपलाई दैवले विनाश निम्त्याइदिएको छ । आफ्नो बद्मासी लुकाउन प्रमाण नै नष्ट गर्ने योजना अनुरुप लगाएको आगोको लप्काले मुलुककै अग्रणी व्यवसायीक घराना चौधरी गु्रपको करोडौं स्वाहाः भएको छ । चौधरी गु्रप अन्तर्गतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा गएसाँझ देखि लागेको आगो आज विहानसम्म पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । यसलाई काठमाडौंको इतिहासमा आजसम्मकै भिषण ठूलो आगोलागी भएको बताइएको छ ।
हेडक्वाटरमा गच्छदार बल्ल भयो आईजीपीस�ग भेटघाट
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदार र प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राना एक महिना लामो अन्तरालपछि आज एउटै कार्यक्रममा देखा परे । इच्छाले नभएर दबाबमै भए पनि आजको ठिक एक महिना अघि आफ्नै प्रस्तावमा आईजीपी बनेका कुवेर सिंह रानासँग असन्तुष्ट रहेका गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदार त्यस यता महानिरीक्षक सहभागी कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भएका थिएनन् । तर, प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा तिम्त्याइँदा बल्ल मन्त्री गच्छदार आज प्रहरी हेडक्वाटर पुगेका थिए ।
असाहय, अनाथ र टुहुराको नाममा �स्वार्थलाभ�, उपहार बटुल्न �कुमारी आमा�लाई भ्याइँनभ्याइँ
काठमाडौं । असाहय, अनाथ, टुहुरा र अपहेलित दीनदुखीको सेवा गर्नु, उनीहरुको संरक्षण गर्नु बराबरको धर्म अर्काे छैन । जो सच्चा मन र तनले समाजसेवा तथा परोपकार धर्ममा लाग्छ, त्यसले लोभलालच, महत्वकांक्षा र इच्छाशक्ति त्यागेर आफूलाई पुन्यकर्ममा समर्पीत गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा, कसैले आफूलाई समाजसेवी या परोपकारी अथवा दानविर भन्दै जती प्रचार�प्रसार गरे पनि कर्म अनुसारको धर्म मिल्दैन ।
काठमाडौं प्रहरीतर्फ दौडाहाको नजर पर्ला कि नाई ? एसएसपीको बदमासी, चेक वाउन्सको मुद्दामा लेनदेनको धम्की ?
काठमाडौं । राजधानीकै प्रहरीले कसैको प्रभावमा परेर चेक वाउन्सको मुद्दा लगाउँदै लेनदेनको समेत रकम असुलीतर्फ चासो दिन्छ भने त्यो प्रहरी आचारणको विरुद्ध हो कि होइन ? तत्कालिन महानरीय प्रहरी आयुक्त तथा वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह रानाले लेनदेनका मुद्दामामिला नहेर्न प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको अवस्थामा समेत काठमाडौं प्रहरी प्रमुख जयबहादुर चन्द, सोही कार्यालयका मुद्दामामिला शाखा प्रमुख डीएसपी अरुण विसी र इन्स्पेक्टर कृष्ण पंगेनीको मिलोमतोमा हरिता बानीया नामकी महिला हनुमानढोका प्रहरी खोरमा परेकी छिन् । बानीयालाई त्यहाँसम्म तान्नका लागि एसएसपी र डीएसपीले योजनाबद्ध ढंगबाट कदम चालेको पिडीत पक्षले जानकारी गराएको छ ।